Selena Gomez ရဲ့ Anxiety ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ် ထွက်ရှိလာပြီး သူမအနေနဲ့ ထိုသီချင်းအပေါ် အမှန်တကယ် စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရ။ – SoShwe
Home/Entertainment/Selena Gomez ရဲ့ Anxiety ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ် ထွက်ရှိလာပြီး သူမအနေနဲ့ ထိုသီချင်းအပေါ် အမှန်တကယ် စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရ။
Selena Gomez ရဲ့ Anxiety ဆိုတဲ့ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ် ထွက်ရှိလာပြီး သူမအနေနဲ့ ထိုသီချင်းအပေါ် အမှန်တကယ် စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ရ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက်က အဆိုတော် Julia Michaels မှ သူမရဲ့ သီးချင်းအသစ်တစ်ပုဒ် မကြာခင်ထွက်ရှိတော့မယ်ဆိုပြီး သူမရဲ့ ပုရိတ်သတ်တွေကို ကျီစယ်သလိုလိုနဲ့ ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
အားလုံး မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ Selena Gomez နဲ့ တွဲဖက်သီဆိုထားတဲ့ “ Anxiety ” အမည်ရ သီချင်းအသစ်တစ်ပုဒ် ထွက်ရှိလာသဖြင့် ပုရိတ်သတ်များအားလုံး အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။ သီချင်းထဲမှာလည်း Selena မှ သူမ တွေ့ကြုံ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေ၊ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ထည့်သွင်းသီဆိုထားတာကို တွေ့ရှိရမှာပါ။
သို့ပေမယ့်လည်း သူတို့နှစ်ဦး ပူးပေါင်းဖန်တီးထားတဲ့ “ Anxiety ” သီချင်းထွက်ရှိလာမှုအပေါ် ပုရိတ်သတ်တွေ အလွန်အမင်း အံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။
Previous Niall Horan နဲ့ Liam Payne တို့မှ One Direction အဖွဲ့ကို ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းဖို့ စီစဉ်နေ။
Next ?? ??????????? Screen Actor Guild ??????????? ??????????? ?????????? ?????????? Black Panther